डा. देवकोटाको खुलासाः युवराज दीपेन्द्रको देब्र कन्चटबाट पसेको गोली दाहिनेबाट निस्केको थियो – Todays Nepal
डा. देवकोटाको खुलासाः युवराज दीपेन्द्रको देब्र कन्चटबाट पसेको गोली दाहिनेबाट निस्केको थियो
दरबार हत्यकाण्डको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । हत्याकाण्डमा राजा हुन सक्ने सम्भावना भएका र नभएका १० भन्दा बढी शाही सदस्यको हत्या भएको थियो । अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार बाहेक सबैजसो मारिएका थिए त्यो घटनामा । धीरेन्द्रकी पत्नी प्रेच्छाको पनि दरबार हत्याकाण्डको तीन महिनापछि रारातालमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । त्यो घटनालाई पनि रहस्यम मानिँदै आएको छ ।
सरकारी दस्तावेजले युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर १५ मिनेटमा सबैको हत्या गरिदिएको बताउँछ । त्यसपछि युवराज दीपेन्द्र स्वंयले भने आफैले आफ्नो कञ्चटमा गोली प्रहार गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
त्यो घटना हुँदा मृतक शाही परिवारको शव परीक्षण डा. उपेन्द्र देवकोटाले गरेका थिए । यसकारण देवकोटालाई दरबार हत्याकाण्डबारे धेरै राज थाहा छ भन्ने अनुमान पनि हुने गर्छ । डा. देवकोटा अहिले आफै क्यान्सरसँग जुधिरहेका छन् । उनले ‘सायद अब बिरामीको उपचारमा फर्किन्न होला’ भनेका छन् । अर्थात देवकोटाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीरअवस्थामा छ ।
जीवनको यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला पनि डा. देवकोटाले आफ्नो जीवन र यथार्थबारे देश सञ्चार डट कममा बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग केही विषयहरु खुलासा गरेका छन् ।
दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट, प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित दुई सदस्यीय छानविन आयोग थियो । त्यसमा प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालले भने समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यो छानविन आयोगका सदस्यले डा. देवकोटालाई पनि विभिन्न प्रश्न गरेछन् । प्रश्न सकिएपछि डा. देवकोटा आफैले एक प्रश्न सोधिदिन आग्रह गरेछन् । उनको आग्रह रहेछ ‘दीपेन्द्रको गोली कहाँबाट पसेर कहाँबाट निस्किएको थियो?’
यो प्रश्न कसरी सोधियो र यसको अन्तर्वस्तुबारे देशसञ्चारले प्रकाशित गरेको सामाग्रीको सानो अंश यस्तो छः
‘त्यसपछि उहाँहरुले पुरक प्रश्नको रुपमा सोध्नुभो। मैले स्पष्ट जवाफ दिएँ– दीपेन्द्रको गोली देब्रे कन्चटबाट पसेर दाहिने कन्चटबाट निक्लिएको थियो। त्यसमा कुनै शंका छैन। कसले हिर्कायो गोली भन्ने कुरो त डाक्टरले भन्ने कुरो हैन। आफैँले हानेको पनि हुनसक्छ, यदि उनले देब्रेहात चलाउन सक्थे भने।
हैन भने अरुले हानेको हुनुर्पयो। तर दाहिने हात मात्र चलाउने मान्छेले देब्रेहातबाट हान्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा बुलेटको डिरेक्सन नै फरक हुन्छ । जुन ट्र्याजेक्टरी भएर त्यो बुलेट गाको छ, त्यो सोझै एउटा कान माथिबाट गएर अर्को काननेरबाट निक्लिएको छ ।
त्यसपछि महत्वपूर्ण कुराको उत्तर भएजस्तो लाग्यो सायद उहाँहरुलाई । पछि उहाँले मलाई जिस्क्याउनु पनि भो, तपाईँ त कानूनको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर ।’
अर्थात अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई के भनेर झुक्याइएको थियो भने ‘दीपेन्द्र आफैले आफैलाई गोली हानेका थिए ।’ मूलतः दीपेन्द्र देब्रे हाते थिएनन् । उनी दाहिने हात नै चलाउँथे । दाहिने हात चलाउनेले देब्रे हातबाट कसरी गोली हान्छ ?
त्यति मात्रै होइन, गोलीले सीधा वारपार गरेपछि पनि कोही मानिस जीवीत होला ? वास्तवमा उनी जीवीत भएको भनेर राजा नै घोषणा गरिएको थियो ।
डा. देवकोटाको बर्णन पढ्दा त्यो बेलाको छानविन आयोगका सदस्यहरु अत्यन्त लठैत रहेको आभाष पनि हुन्छ । किनभने सबै नेपालीलाई छोएको त्यति धेरै संवेदनशील विषयमा छानविन गर्नेहरुको मुड ‘मजाकीया’ देखिन्छ ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको र नेपालीहरु धेरै दुःखी भएको बेला छानविन आयोगका सदस्यहरुको शैली भने ‘जिस्किने’ जस्तो देखिन्छ ।
देब्रे कञ्चटबाट पसेको गोली दाहिनेबाट सीधा लाइनबाट निस्केको देवकोटाले भनेका छन् । त्यतिमात्रै होइन देब्रे कानमाथिबाट गएको गोली दाहिने कानमाथिबाट निस्केको थियो । अर्थात असाध्यै मिलाएर दीपेन्द्रको कञ्चटमा गोली हानियो । पछि विषयलाई अनर्गल प्रचार गर्ने गरी दस्तावेज बनाइयो र भनियो, ‘युवराज दीपेन्द्रले सबैलाई गोली हाने । अनि आफै आफूलाई पनि गोली प्रहार गरे ।
भेटियो अहिलेसम्मकै अदभुत माछा, आराजस्तो ३२ दाँत भएको डरलाग्दो माछा फेला
बंगला घरमा बसेर हेर्नुहोस यस्तो धन्दा गर्दा रहेछ +१८ ले मात्र हेर्नुहोला !